अब ७ वटा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, ७५३ तहमै आयुर्वेदका संरचना – Health Post Nepal
२०७८ जेठ ३० गते | Sunday, 13 Jun, 2021
अब ७ वटा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, ७५३ तहमै आयुर्वेदका संरचना
२०७५ मंसिर १८ गते १९:३४
सोह्रश्राद्धमा गरौँ सद्वृत्तको पालना
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुँले ७ जना माग्यो कर्मचारी
२६ करोड लगानीमा पोखरामा प्राकृतिक चिकित्सालय बन्ने
तागतवर्धक कुरिलो अनेक रोगको औषधि
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवद्र्धन एवम् विस्तार गर्न सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल बनाउने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा आयुर्वेदका कुनै न कुनै संरचना बनाइने भएको छ ।
आयुर्वेदिक सर्जरी, उपचारसहित वैकल्पिक चिकित्साका विभिन्न विधासमेत समेटी प्रदेश सरकारमातहत रहने गरी ५० शय्याको प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल बनाउन लागेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जनाएको छ । पुरानो संरचनाअनुसार दाङमा रहेको आयुर्वेदको एउटा मात्रै क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश ५ सरकारमातहत गइसकेको छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल बनाउने गरी नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गइसकेको छ ।
आयुर्वेद व्यवस्था विभाग अनुगमन, अनुसन्धान तथा समन्वय शाखाका प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सक विजय भुर्तेलका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार ४ सय ९९ वटा स्थानीय तहमा थप संस्था बनाउनुपर्नेछ । हाल भएका ३ सय ५ वटा आयुर्वेद औषधालयहरू २ सय ५४ वटा स्थानीय तहअन्तर्गत छन्, जुन स्थानीय सरकारमातहत गइसकेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक आयुर्वेद चिकित्सक वासुदेव उपाध्यायका अनुसार प्रदेश १ का लागि झापाको लखनपुर र प्रदेश ७ मा गेटा, कैलालीमा पूर्वाधार निर्माणसमेत भइसकेको छ । तीबाहेक जनकपुर र कास्कीमा पनि प्रादेशिक अस्पताल बनाउनका लागि जग्गा प्राप्तिको क्रम चलिरहेको छ ।
महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालको नीतिगत निर्णय केन्द्र सरकारबाट भएपछि बनाउने र सञ्चालनको काम भने प्रदेश सरकारमातहतमै हुनेछ ।
‘प्रदेश तहमा एक–एकवटा रेफरल अस्पताल, स्थानीय तहमा पनि कुनै न कुनै संरचना हुन्छ,’ डा. उपाध्यायले भने । अस्पतालहरूबाट आयुर्वेदिक औषधि, पञ्चकर्म, योग, क्षारसूत्र (सर्जरी) सँगै प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपन्चर, होमियोप्याथी, आम्ची, युनानीलगायत सेवा पर्छन् ।
साबिकको ‘आयुर्वेद विभाग’लाई नयाँ संरचनामा ‘वैकल्पिक चिकित्सा’ समेत थपेर ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग’ नामकरण गरिएको छ । विभागअन्तर्गत ‘वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा’ थप गरिएको छ । महाशाखाअन्तर्गत होमियोप्याथी तथा आम्ची चिकित्सा शाखा, प्राकृतिक तथा अकुपन्चर चिकित्सा शाखासमेत नयाँ बनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले ४ वैशाखमा स्वीकृत गरेको संगठन संरचनाअनुसार यसअघि जिल्ला तहमा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्रहरू प्रदेश सरकारमातहत गइसकेका छन् । पुरानो संरचनाअनुसार एउटा क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल १४ वटा अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, ६१ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्र सञ्चालनमा थिए ।
हाल आयुर्वेदअन्तर्गत सरकारीस्तरमा २ हजारभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा १ हजार प्राविधिक र सोहीहाराहारीमा अप्राविधिक छन् । तीमध्ये ९० को हाराहारीमा मात्रै आयुर्वेद चिकित्सक छन् ।
आयुर्वेदका विद्यमान स्वास्थ्यसंस्थाहरूबाट ९० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिए पनि हाल २३ प्रकारका औाषधि मात्रै १२ महिनै उपलब्ध गराउन सकिएको डा. उपाध्याय बताउँछन् । ‘बजेट कम हुँदा सबै औषधि सधैँ पुर्याउन सकिएको छैन,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले टप १० डिजिजमा प्रयोग हुने २३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ ।’
आयुर्र्वेदलाई मौलिक, भरपर्दो र साइडइफेक्टरहित चिकित्सा पद्धति भनिए पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सिंगै विभाग नै खडा गरिए पनि स्वास्थ्यसेवाको कुल बजेटको करिब ४ प्रतिशत मात्रै आयुर्वेदले पाउने गरेको छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागअन्तर्गत ३ वटा महाशाखा छन् । जसमा जडीबुटी, औषधि एवम् अनुसन्धान महाशाखा, आयुर्वेद चिकित्सा महाशाखा तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा छन् । जडीबुटी, औषधि एवम् अनुसन्धान महाशाखाअन्तर्गत ३ वटा शाखा छन्, जसमा जडीबुटी तथा औषधि व्यवस्थापन शाखा, आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा र प्रशासन शाखा रहेका छन् ।
रेफरल तहका अस्पताल बनाउँदा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन भए पनि विशेषज्ञ जनशक्ति भने झन्डै दोब्बर आवश्यक पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संघीय संरचनामा आयुर्वेद – नाम परिवर्तन, जनशक्ति उही
साबिकको ‘आयुर्वेद विभाग’लाई नयाँ संरचनामा ‘वैकल्पिक चिकित्सा’ समेत थपेर ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग’ नामकरण गरिएको छ । विभागअन्तर्गत ‘वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा’ थप गरिएको छ । महाशाखाअन्तर्गत होमियोप्याथी तथा आम्भी चिकित्सा शाखा, प्राकृतिक तथा अकुपन्चर चिकित्सा शाखासमेत नयाँ बनेका छन् ।
केन्द्र सरकारअन्तर्गत नरदेवी अस्पताल, सिंहदरबार वैद्यखाना, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र छन् । जनशक्तिका हिसाबले सबै संरचना रहेको हुँदा कुनै पनि जनशक्ति फाजिलमा जाने अवस्था नरहेको विभागले जनाएको छ ।
हाल आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागअन्तर्गत ३ वटा महाशाखा छन् । जसमा जडीबुटी, औषधि एवम् अनुसन्धान महाशाखा, आयुर्वेद चिकित्सा महाशाखा तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा छन् । जडीबुटी, औषधि एवम् अनुसन्धान महाशाखाअन्तर्गत ३ वटा शाखा छन्, जसमा जडीबुटी तथा औषधि व्यवस्थापन शाखा, आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा र प्रशासन शाखा रहेका छन् ।
आयुर्वेद चिकित्सा महाशाखाअन्तर्गत आयुर्वेद सेवा व्यवस्थापन शाखा र अनुगमन, अनुसन्धान तथा समन्वय शाखा गरी २ वटा शाखा छन् । वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखाअन्तर्गत २ वटा शाखा छन्, जसमा होमियोप्याथी तथा आम्ची चिकित्सा शाखा र प्राकृतिक तथा अकुपन्चर चिकित्सा शाखा छन् ।
Tags: आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा
चिकित्सक भन्छन् – ‘पहिलो डोज खोप लागेकाहरू नआतित्नुहोस, ६ महिनासम्म शरीरमा एन्टिबडी रहन्छ’
पत्रकारलाई मिडिया हेल्प फाउण्डेसनद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
कोरोना संक्रमण ह्वातै घट्यो, आइतबार २ हजार ४०७ जनामा पुष्टि
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा १ साता थप, यी क्षेत्र भयो खुकुलो
खोप सहयाेगका लागि बेलायत सरकारलाई पत्र पठाउने